Mormiin sochii daldalaa dhaabuu Oromiyaa woliin gayaa jira - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mormiin sochii daldalaa dhaabuu Oromiyaa woliin gayaa jira
Mormiin sochii daldalaa dhaabuu Oromiyaa woliin gayaa jira
Waamicha mormii daldala guyyaa shaniif guutuu Oromiyaa keessatti dhaabuudhaaf godhameef ummanni deebii quubsaa laataa jira. Daldalli Oromiyaa bakka garagaraa keessatti dhaabatuu fi sochiin geejjibaas addaan cituudha kan ragaaleen jiddugaleessa, baha, lixaa fi kibba Oromiyaa irraa bayan argisiisaa jiran.
Magaalonni akka Amboo, Awodaay, Naqamtee, Wolisoo, Hirnaa, Dodolaa, Baabbillee, Roobee Baalee, Holataa, Buraayyuu fi kkf addadurummaadhaan kan mormii kana geggeessaa jiran. Daandii lixa Oromiyaa fi Finfinnee wolqunnamsiisu bakka heddutti addaan citeera. Isa Baahir Daarii fi Finfinnee wolqunnamsiisu irras sochiin jiru xiqqaadha.
Qeerroon konkolaataa fi manniin daldalaa mormii kana irratti hirmaachuu didan ykn mormii dadhabsiisuuf tattaafatan irratti tankaarfii fudhataa jiru jedhama. Mootummaanis sochii ummataa kana fashalsiisuuf asii fi achi jedhaaru. Doorsisaan cinatti suuraalee sochiin daldalaa fi geejjibaa akka hin jeeqamne argisiisu wolitti aansaa karaa miidiyaa hawaasaan maxxansutti jiru.
Mormiin kuni mormii mana sochii diiagdee hunda dhaabuudhaan mana taa’uuti. Yaaddoon jiru mormiin guyyaa shaniif waamame gara boodaatti ummata dadhabsiisuu fi gara harca’uutti geessuu mala isa jedhu. Namooni dubbifne tokko tokko mormiin kuni osoo guyyaa sadi bira darbuu baatee irra bu’aa qabeessa ta’a kan jedhan.
Dhimmi ijoon ummata gara tankaarfii kana fudhachuutti dhiibee mormii hidhamtoota siyaasaa, saamicha lafa Oromoo fi ba’aa gibiraati.
mormii mana taa'uu
Previous articleOromoon Oromiyaa saamicha naannoo Somaaleetiin geggeeffamaa jiru irraa baraaruu qaba
Next articleWaamichaa ADO/ODF Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf